Indlela yokuCwangcisa isiKhangeli kwiWindows 10
Xa ufika Windows 10, i-Edge isetwe njengesikhangeli esingagqibekanga: Cofa kwikhonkco lewebhu kuxwebhu, umzekelo, kunye ne-Edge iyaxhuma ukuze ulayishe iphepha lewebhu kwisixhobo sakho seWindows 10. Kodwa, ukuba ukhetha ukusebenzisa isikhangeli esahlukileyo nge Windows 10, unokuseta into oyikhethileyo.
Zombini iFirefox kunye neChannel zinikezela ukuba zibe ngumkhangeli zincwadi wewebhu, nje ukuba uzifake. I-Internet Explorer inokukhetha, kodwa akunjalo ebusweni bakho. Banebhokisi yokutshekisha ebaxelela ngokusisiseko ukuba bayeke ukubuza.
Kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza ngegabapentin
Kulula ukutshintsha isikhangeli sakho esingagqibekanga kwaye usete isikhangeli osikhethile kwiWindows 10. Nantsi indlela:
doxycycline yosulelo lwesono
Cofa kuQala, emva koko ucofe Windows 10 Useto icon (ejongeka ngathi ivili).
Cofa u Iiapps icon. Emva koko, ngasekhohlo, khetha ii -apps ezimiselweyo.
Ubona ibhokisi yencoko yababini beNkqubo.
Setha isikhangeli sakho esingagqibekanga apha.
Ekunene, skrolela ezantsi ungene kwisikhangeli sewebhu; amathuba okuba ilungile ithi iMicrosoft Edge. Cofa IMicrosoft Edge .
Ubona uluhlu lwazo zonke izikhangeli ezifakwe ngoku kwikhompyuter yakho.
Khetha isikhangeli ofuna ukuba sibe sisikhangeli sakho esingagqibekanga. Emva koko cofa u-switch xa iMicrosoft izama ukukuqinisekisa ukuba uqhubeke usebenzisa i-Edge.
Oku kuxela Windows 10 ukunxulumana nesikhangeli phantse lonke igama lefayile elandelwa ngumkhangeli.
Musa ukuthemba iMicrosoft ukuyabela ulwabiwo olungagqibekanga? Kulungile. Emazantsi ezantsi, cofa kwikhonkco elithi Cwangcisa okungagqibekanga nge-App.
Uluhlu lokukhetha luyavela. Yhu! Nini Windows 10 iseta ukungagqibeki kwe ugoogle Chrome , ayitshintshi iifayile zePDF kwiChannel. Endaweni yokuba igcina iifayile zePDF ngaphakathi kwiEdge. Intwana yamachibi amdaka apha.
iipilisi ezimhlophe ezinamachaphaza abomvu
I-Chrome inokusingatha ezi ntlobo zeefayile kunye neeprotocol.
Khetha iibhokisi ecaleni kweefayile ofuna ukuzivula kwisikhangeli sakho esitsha, emva koko ucofe ku Gcina.
Okhethiweyo Windows 10 Inkqubo (kule meko, uGoogle) iba yinto emiselweyo kolo hlobo lwefayile. Ukuba utshintsha ibhokisi yePDF ukuya kwiChannel, umzekelo, ukucofa ifayile yePDF uyakuyivula kwiChannel- hayi kwi-Edge.
ioksijini yokusetyenziswa kwekhaya
Uphi umgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona
Ukuphononongwa kwendalo ngamabhaso
i-acyclovir yesifo esibandayo
ungathatha iflonase nge-claritin
azoles losulelo igwele